အိမ်မက်လွင်ပြင် - Dreamz valley: May 2012
မယ်လ FSP ကျောင်းမှာ
Posted by Sawlu at 3:26 PM No comments:
ပဋိပက္ခတွေကြားက မတူညီတဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို ဆောင်းပါးအဖြစ် ရေးသားတင်ဆက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ကျေးလက်တောရွာတွေမှာ ကျောင်းနေချင်လျက် အနေခက်ပြီး ကျောင်းထားလျက်နဲ့ ကျောင်းမနေချင်တဲ့ အနာဂတ် ရင်သွေးငယ်လေးတွေ ခုချိန်မှာ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာဆို လူကြီးတွေနဲ့အတူ လယ်ထဲဝင်ကူနေရသလို၊ နွားကျောင်းနေရသူတွေ၊ မောင်ညီမအငယ်လေးတွေ ထိန်းပြီး အိမ်မှာချက်ပြုတ်နေရတဲ့ ကလေးတွေအထဲမှာ “တာဘုခလီး”ဆိုတဲ့ ကရင်ကလေးငယ်တစ်ဦးလည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွဲ၊ နွားတွေစားဖို့ မြက်ရှားပါးတဲ့ နွေကာလမှာ နီညိုရောင် နွားထီးတစ်ရှဉ်း(နှစ်ကောင်)ကို ရှေ့က တစ်ကောင်မောင်းပြီး နောက်က တစ်ကောင်ကို ဆွဲလာနေတဲ့ ကလေးငယ်လေးကတော့ ဗမာလို “ကုသိုလ်မျိုးစေ့”လို့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ “တာဘုခလီး”ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ကရင်ကလေးငယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အသားလေးညိုညိုနဲ့ မျက်နှာမှာ သောကကင်းမှုဟာ ပူပြင်းတဲ့ နွေနေဒဏ်ကို အံတုနေပါတယ်။
Posted by Sawlu at 8:51 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံက ပါတီခေါင်းဆောင် ၅ ဦး သြစတြေးလျနိုင်ငံသွားမည်
သြစတြေးလျနိုင်ငံ Center for Democracy Institution က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ကမ်ဘာရာမြို့တော်ရှိ သြစတြေးလျ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်များ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး ပါတီခေါင်းဆောင် အနည်းဆုံး ၅ ဦး တက်ရောက် ဆွေးနွေးမယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
ဒီ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာပြည်)၊ တစညပါတီ၊ ချင်းအမျိုးသားပါတီနဲ့ ရခိုင်အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကို မေလ ၂၁ ရက်ကနေ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေအပြင် အာဆီယံနိုင်ငံ ၃ နိုင်ငံက နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေလည်း တက်ရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Sawlu at 3:56 PM No comments:
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်တွင် ညီနောင်တိုင်းရင်းသားပါတီများ စုပေါင်းကျင်းပသည့် ၆၅ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနား "Nationalistic Brotherhood ပါတီဆိုပြီး ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဟာကတော့ ရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားအားလုံးပေါ့ဗျာ၊ ပါတီအသေးလေးတွေ အကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းထဲကို အဲဒီပါတီကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ ဝင်ပြီးတော့ အလုပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ အဓိက ကတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား အရေးအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကလည်း ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။ နောက်ရော NLD တို့၊ တစည တို့ဆိုတာကလည်း ကျွန်တော်တို့လောက် လုပ်နိုင်မယ်မထင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ တိုင်းရင်းသား အရေးအရာ ကိစ္စတွေ အားလုံးအတွက် တိုင်းရင်းသားတွေ ဦးဆောင်ပြီး ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပါတီတွေကသာလျှင် ကျကျနနကိုင်တွယ်ပြီးမှ လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က ယုံကြည်ပါတယ်"
Posted by Sawlu at 3:49 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၎င်းပိုင် အက်ဒမန်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ဆိပ်ကမ်းတခု တည်ဆောက်တော့မည့် အစီအစဉ်သစ်တခု ရေးဆွဲနေသည်ဟု ကြားသိရသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း ထားဝယ်တွင် ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်မည့် အကြီးစားစက်မှုဇုန်တခု ဖန်တီးရေးအိမ်မက်ကို အဆုံးသတ်တော့မည်ဟု အရိပ်အမြွက် ပြလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းမှ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တခု (ဓာတ်ပုံ - ဧရာဝတီ)
၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလတွင် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရများအကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် သဘောတူခဲ့သည့် ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းမှာ ယခုအခါ တဝက်တပျက် ဖြစ်တော့မည်လော။
ရေနံတင်သဘောင်္များအတွက် ဆိပ်ကမ်းများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ရေနံဓာတုပစ္စည်းစက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအပါအ၀င် အဆိုပါ လုပ်ငန်းစီမံချက်သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာစစ်အစိုးရက အပြောင်းအလဲများ မလုပ်သည့်အချိန်အထိ တိုးတက်မှုတစုံတရာ မရှိခဲ့ပေ။ အပြောင်းအလဲများလုပ်ခဲ့သည့် နောက်ပိုင်းများတွင်သာ တတိယကြားခံ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ငွေကြေးအထောက်အပံ့များ ရလာနိုင်သော အလားအလာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
Posted by Sawlu at 10:47 PM No comments:
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး မူးယစ်ဆေးနှင့် မပတ်သက်ဟု ထိုင်းစစ်တပ် ပြော
တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) မှ ဗိုလ်ချုပ် စောလားပွယ် (ခေါ်) ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေးသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက်အထား မရှိကြောင်း ထိုင်းစစ်တပ် အမှတ် ၃ ဒေသမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောကြားလိုက်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) ထိန်းချုပ်ထားသည့် ဒေသတွင် နယ်စပ်ဂိတ်များ ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင်မှ လယ်သမားများ မြန်မာပြည်ဘက်သို့ ကူးနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Bangkok Post)
အမှတ် ၃ ဒေသ စစ်တပ်မှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူးကြီး Thardsak Ngam Sonong က “မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ထိုင်းစစ်တပ်ထဲမှာ အချက်အလက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ် နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အထောက်အထားတွေ မရှိဘူး” ဟု ထိုင်းဘာသာဖြင့် ရေးသားထားသော မန်နေဂျာအွန်လိုင်း သတင်း အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် မေလ ၁၁ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားသည်။
DKBA ထိန်ချုပ်ဒေသတွင်လည်း မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်မှု မရှိဟု ယုံကြည်ကြောင်း၊ ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်းမှာ ယခင်နှစ်များစွာက မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေး အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံထားဟန်တူကြောင်း ဗိုလ်မှူးကြီး Thardsak Ngam Sonong က ဆိုသည်။
Posted by Sawlu at 10:32 PM No comments:
အပစ်ရပ်ထားမှုများ UNFC ပြန်သုံးသပ်မည်
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်များကို ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့အထိ အစိုးရဘက်မှ မရပ်ဆိုင်းပါက အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့အစည်းများ ရရှိထားသော အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီမှုများကို
Posted by Sawlu at 8:35 PM No comments:
ဟုသြစတြေလျနိုင်ငံ၏အအောင်မြင် ဆုံးသောဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ ဂျွန်န်ဟားဝါ့ဒ် ကဆိုမိန့်ခဲ့ဖူးသလို
“ဒီမိုကရေစီဆိုသည်မှာ အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော စနစ်တခုဖြစ်သော်ငြားလည်း အခြားသောနိုင်ငံရေးစနစ် အားလုံးထက် တော့ကောင်းပါသည်”
မြန်မာပြည်ကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလမ်းစကို ရောက်နေပြီ၊ ပြောင်းလဲနေပြီ ဟူသောမှတ်ချက်များ၊ အသိအမှတ်ပြုမှုများနှင့်အတူ ပြောင်းလဲနေသော မြန်မာနိုင်ငံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပြောင်းလဲဆက်ဆံလာသော သဘောထားပေါ်လစီများသည် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Sawlu at 2:10 AM No comments:
စစ်အစိုးရ၏ ကျူးကျော်စစ်ကြောင့် ဘေးဒုက္ခအပေါင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ညီနောင်ကချင် တိုင်းရင်းသားတို့ဘ၀အားစာနာလျက် ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားဖော်ပြပါသည်။
၁၉၇၄ ခုနှစ် မဆလ စစ်အစိုးရလက်ထက် သောင်းကျန်းသူအမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေး ကြွေးကြော်သံနှင့် အတူ ဖြတ်လေးဖြတ် ဆိုင်းပုဒ်များကို မြန်မာပြည်မြို့ရွာအနှံ့စိုက်ထူထားနေချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြတ်လေးဖြတ် စနစ်သည် တိုင်းရင်းသားတို့၏ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင် တောင်းဆိုခြင်းအား ဥပဒေကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးကြောင်းအရ ဖြေရှင်းရန် ငြင်းပယ်ပြီး အင်အားသုံးအပြုတ်တိုက်ရေးနှင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ နှိပ်ကွပ်ချေမှုန်းရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဖြတ်လေးဖြတ်စနစ်ကြောင့် အလယ်ရိုးမနှင့် အရှေ့ရိုးမမှ များစွာသောကရင်ပြည်သူလူထုများ ကျေးရွာပျက်၊ အသိုက်အမြုံပျက်၊ ဘ၀ပျက်ခဲ့ရပါသည်။ ရွာမီးရှို့ခံရခြင်း၊ အဓ္ဓမပြောင်းရွှေ့ခံရခြင်း၊ ဆန်စပါးရိက္ခာသိမ်းဆည်း၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ အပြစ်မဲ့ရွာသားများ အကြောင်းမဲ့သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း အစစသောသတင်းဆိုးများ နေ့စဉ်နှင့်အမျှကြားနေရသာအချိန် ကိုယ့်ရွာ၊ ကိုယ့်အလှည့်ဘယ်တော့ရောက်လာမလဲဟု စိုးတထိတ်ထိတ်နှင့် ကြောက်ရွံ့နေရသောကာလဖြစ်ပါသည်။
Posted by Sawlu at 11:04 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်နှုတ်ခမ်းမွေးကို ထိုင်းက မူးယစ်ရာဇာလို့ ဆုငွေထုတ်လိုက်တဲ့ သတင်းနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး သထုံခရိုင် တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်လင်းထင်ကို သတိရတယ် ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးနဲ့ ဗိုလ်လင်းထင် မဲဆောက်ကို ၀င်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ဆက်စပ်ရေးသား လာတာကို ဖူ့တာမိက် ဘလော့ကနေ ဖတ်ရပါတယ်။ အဲဒီကနေ တဆင့် သူရေဝ့်ဖါန်ဘလော့မှာလည်း ဗိုလ်လင်းထင်ရဲ့ မဲဆောက်မြို့ သိမ်းတဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးသားလာတဲ့အပြင် အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်မြနဲ့ ဗိုလ်လင်းထင် ဆက်ဆံရေး အခြေအနေတွေကိုပါ ရေးသားလာတာကို ဖတ်ရပါတယ်။
ဗိုလ်လင်းထင်(အလယ်)နှင့် တပ်မှူးတချို့။ (ဓါတ်ပုံ-KIC)
ဒါ့အပြင် သောသီခို ဘလော့မှာလည်း ဗိုလ်လင်းထင် မဲဆောက်မြို့သိမ်းအပြီး အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြသနာတွေကို ဗိုလ်ချုပ်မြကနေ နောက်နောင် မဖြစ်အောင် ထိုင်းတွေကို တာဝန်ယူ ကတိပေးပြီး ပြသာနာတွေ ဖြေရှင်းခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီစာတွေကို ဖတ်အပြီး စာရေးသူလည်း သိထားသမျှ ဖတ်ထားခဲ့ သမျှတွေနဲ့ ကြားထားခဲ့ သမျှတွေကို ရေးသားလာစေဖို့ တွန်းအားကြီး တခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ ဆိုရင် မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
Posted by Sawlu at 5:00 PM No comments:
၁။ ထောက်လှမ်းရေးပြုတ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်သည် ၀လူမျိုးတသိန်းကျော်ကို ရှမ်း(မြောက်)မှ ရှမ်း(တောင်)သို့ရွှေ့ပေးခဲ့ပြီး ၀သပတပ်ကိုပါ ထိုင်းနယ်စပ်သို့ အခြေချခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၂။ ၀တပ်နှင့် ခွန်ဆာတပ်တို့ နယ်မြေလုတိုက်ပွဲ ၁၉၉၀နှစ်များတ၀ိုက်မှာ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း ခွန်ဆာသည် န၀တ ထံလက်နတ်ချခဲ့သည်။
၃။ ခွန်ဆာတပ်ဖွဲ့ ဝင်တယောက်ဖြစ်သည့် စိုင်းနော်ခမ်းလည်း လက်နတ်ချရာမှာပါခဲ့သည်။
၄။ န၀တမှ ၀သပ(ရှမ်းတောင်ပိုင်း) ဌာနချုပ်ကို မိုင်းယောင်းမှာ အခြေပြုခွင့်ပေးသလို၊ခွန်ဆာလူများကိုလည်း ဟိုမိန်းမှာ အခြေပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။
၅။ စိုင်းနော်ခမ်းသည် ဟိုမိန်း-တာချီလိတ်-ကျိုင်းတုံကိုအခြေခံခဲ့သည်။ တြိဂံဒေသတိုင်းမှာ ဗိုလ်သိန်းစိန် တိုင်းမှူးဖြစ်ချိန်မှာ စိုင်းနော်ခမ်းကို ပြည်သူ့စစ်လည်းမဟုတ်၊ကာကွယ်ရေးတပ်လည်းမဟုတ်ပဲ အင်အားစုလက်နက်ကိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။
Posted by Sawlu at 9:44 PM2comments:
တခါက ကရင်ရွာလေးတရွာမှ စောခလိုဆိုသူ မြို့တက်ပြီးဈေးဝယ်သွားရာ အိမ်နီးချင်း အဒေါ်ကြီးမှ ပစ္စည်း တခု ၀ယ်လာပေးရန် အမှာပါးလိုက်လေသည်။
မြို့ရောက်ပြီးဈေးဝယ်စဉ် အဒေါ်ကြီးမှာလိုက်သော ပစ္စည်းအမည်အားမေ့နေသဖြင့် ဆိုင်ရှင်အားမေးရန် အခက်တွေ့ပြီး ဆိုင်ထဲလှည့်ပတ်ကြည့်ပြီးရှာနေလေသည်။
ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးမှာ မိမိဆိုင်ထဲဟိုဖက်ဒီဖက် ဟိုကြားဒီကြားလျှောက်ပတ်ကြည့်နေသော စောခလိုအားကြည့်၍ မသင်္ကာဖြစ်လာပြီး “ဟေ့ကောင်လေးဘာလိုက်ရှာနေတာလဲ” ဟုမေးရာ စောခလိုက “ဟိုပစ္စည်းလေ. ဟို. မေ့နေလို့” ဟု ပြန်ပြောရင်း ဆိုင်ထဲတွင် ဟိုမွှေသည်မွှေ၊ ဟိုပတ်ဒီပတ်ရှာနေလေသည်။
ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးကလည်း အူကြောင်ကြောင်ပုံစံနှင့်သူ့အား စိတ်မရှည်၊ အမြင်ကပ်လာသဖြင့် ထမိန်လှန်၍ “မေ့နေရင်လည်း ဒီမှာကြည့်” ဟု ရွဲ့ပြောလိုက်ရာ စောခလိုကစိတ်မဆိုးနိုင်ဘဲ ဆိုင်ရှင်အဒေါ်ကြီးအားဝမ်းသာ အားရပြန်ပြောလိုက်ပုံက “ဪ သတိရပြီ ဓာတ်မီးခြစ်” တဲ့။
Posted by Sawlu at 5:26 PM No comments:
အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်လူငယ်လေးတယောက် နာနာကျည်းကျည်း ပြောလိုက်တဲ့စကားမို့ ရုတ်တရက်အံ့အားသင့်မှင်သက်မိသွားပါတယ်။ လူတဦး၊ မိသားစုတခု၊ လူမျိုးတမျိုးကိုမုန်းတီးခြင်းသည် မလိုလားအပ်ရာ၊ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့အမုန်းဟူသည် အမုန်းခံရသူနှင့် မုန်းသူနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက် ပူလောင်ဆုံးရှုံးမှုမှတပါး ဘာကိုမှမပေးနိုင်ပါ။
ငယ်ရွယ်နုနယ်သော ဤကလေးငယ်၏ရင်ထဲတွင် အမုန်းတရားများ အဘယ်ကြောင့် ဤမျှတောက်လောင်နေသနည်း။ နာကျည်းမှု၊ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှုတို့ရောယှက်နေသော သူ့မျက်ဝန်းမှ စီးကျလာသောမျက်ရည်မြစ် ကိုဆန်၍ သူ့ဘ၀၊ သူ့အတိတ်ဆ်ီသွားမိလေတော့ အမုန်းတရားတို့မြစ်ဖျားခံရာ သူ့ငယ်ဘ၀ကား မယုံနိုင်အောင် နာကျင်ကြေကွဲဖွယ်အတိ ရှိနေတော့သည်။
Posted by Sawlu at 11:39 PM 1 comment: